Ceelgows Xogta Gudoomiyaha Barlamaaka oo loo doortay General Muuse Xasan iyo goob cusub oo amniga la xiirrta oo loo raray Last update 20-08-12Waxaa goor dhaw ka hor soo gaba gaboobay dhaarinta Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya ayadoo waxaana si habsami leh u socda munaasabada howshaasi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Xildhibaannada galabtay loo dhaariyay in ay noqdaan mustaqbalki cusub ee Soomaaliya ayaa tiradooda ay tahay ilaa 211- Mudane, ayadoo uu dhaariyay Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Abukaate Ceydiid Ilkaxanaf, waxaana dhaarintii kadib Ilka xanaf u sheegay xildhibaannada cusub iney iskasoo dhex xulaan xubinta ugu da�da weyn oo Gudoomin doona shirarka Baarlamaanka.
Baarlamaanka CUSUB ayaa dhinaciisa u doorteen inuu gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee Baarlamaanka Soomaaliya General Muuse Xasan Cabdulle ayaa ah iminka ninka u da�da weyn ee Xildhibaannada cusub.
Waxaana Gudoonka cusub ee Baarlamaanka Mudane General Muuse Xasan Cabdulle oo hadal kooban jeediyey ayaa sheegay in xildhibaannada laga bilaabo xiligan ay bilaabanayaan qabashada xubnaha musharaxiinta u ah gudoonka Baarlamaanka ayadoo gudi doorashana loo saari doono arintaasi.
Gudomiyah Cusub ayaa waxaa uu shegay in ila iyo 25 bisha ku egtahay qabashada arjiyada Musharaxiinta u tagan Gudomiyaha Barlamaanka 26 bishana ay dhici doonto dorashada Gudomiyaha Barlamaanka. allidamaale@hotmail.com Muqdisho Gudoomiyaha Mudug iyo waxgarad kormeer ku tagay deegaanka Dhagaxyo-caddoBaarlamaanku wuu Garanayaa Khaladka, Balse Kama Hadli Karaan Amaankooda.Darteed Warbixin: DF oo la sheegay in ay arruurinayso Ciidan Qabiil oo loo ekaysiiyay ShabaabDhageyso, Fiiro gaar ah: Gabaygii Cusbaa ee m/wayne xasan Sh. Farxadda Jubaland iyo baroorta MuqdishoWaa kuma Ninka Uu Madaxweyne Hassan Culusow, u direy Kismaayo?Beesha Sade oo ka arinsanaysa sidii ay ka yeeli lahayd Col; Barre HiiraaleC/laahi Xuseen oo DF ku dhaliilay qaabka ay u maareysay dib-lumaasiyiinta SomaliaXiriirka Federaalka & SL oo sii xumaaday iyo Wasiirka Caafimaadka SL oo ka baxay Shirka ka dhacayey SwitzerlandDr.Farolle "Jubaland hadii la diido, dowladana waa la diidi"